I-Orlistat neTadalafil powder ekhiqiza ifektri-CMOAPI
Imikhiqizo yekhwalithi ephezulu kumele ibe nokuqinile
Ifektri yethu yi-GMP, cGMP
I-ISO: 9001: 2008 eqinisekisiwe.
Sinikezela nge-CMO ne-API iseva yokumisa eyodwa
okubi: R&D, ukukhiqiza, ukwenziwa
ing kanye nokuthengisa.
I-CMOAPI inganikela ngalezi zinsizakalo ezilandelayo, zazo zonke zixhaswa izinqubomgomo zethu eziqinile zokuvikelwa kwe-Intellectual Property (IP), ukuqinisekisa ukuthi amaphrojekthi aphathwa ngendlela eqine kakhulu yokuzethemba ngaso sonke isikhathi.
I-CMOAPI for Drug Discovery iyisisombululo esisekelwa amafu, esibonisa ukuhlaziya ulwazi lwesayensi kanye nemininingwane yokwambula ukuxhumana okukhona nokufihliwe okungasiza ukwandisa amathuba okuvela kwesayensi.
Eminyakeni eyishumi edlule, i-CMOAPI ibinikela ngezinsizakalo ezijwayelekile zokuqamba kanye nezinsiza zokwenziwa. Izinga lethu lensizakalo lingahluka ukusuka ebuntshini elincane le-milligram liye kumathani wezinsizakalo zokukhiqiza ezinkulu.
Ithimba lethu lokuthuthukiswa kwamakhemikhali, elinabantu abangaphezu kuka-50 ososayensi emazweni ethu, lidlula ukulindela ngisho nasemisebenzini eyinselele kakhulu. Ukusebenza kuma laboratories ase-state-of-the-art enenqubo yakamuva kanye ne-instrumentation yokuhlaziya.
I-CMOAPI ingumhlinzeki we-synthesis wezemithi nokwenza inkontileka i-R&D.
IJINAN CMOAPI BIOTECHNOLOGY CO., LIMITED. eyasungulwa ngo-2007, yinkampani yebhizinisi lobuchwepheshe ebandakanyeka ocwaningweni, ekuthuthukisweni nasekumakethweni kwemithi eluhlaza. Imikhiqizo yenkampani yenkampani: iLorcaserin, abalamuli beLorcaserin, i-orlistat, iSesamol, i-tadalafil kanye nabaxhumanisi be-tadalafil, njll. Ifektri yethu inokutholwa okuphelele imishini, amasethi angama-60 e-HPLC, amasethi angama-20 ama-chromatographs kagesi, i-LCMS, i-ELSD, i-ultraviolet nama-spectrometer abonakalayo, ama-dryer amaqhwa nezinye izinsimbi ezithuthukile. Isidlulile isitifiketi se-ISO14001, i-ISO9000 ne-DMF ngokuhlangana nokutholwa, futhi inesistimu ephelele yokuphathwa kwekhwalithi.
Inkampani yethu isebenzisa ochwepheshe abaningi abaphezulu abanesizinda sokucwaninga samazwe omhlaba, futhi inamandla aphelele ezifundo zelebhu, ukuhlolwa komshayeli nokukhiqizwa kwezimboni. Kunodokotela abayi-11 namakhosi angaphezu kuka-46, ososayensi, nonjiniyela enkampanini yethu.Isizinda sokukhiqiza se-API sihlanganisa indawo engaphezu kwama-40 mu.Isitshalo semithi se-GMP sihlanganisa indawo engaphezu kuka-160mu futhi sinendawo yokusebenzela yesimanje, i-laboratory yokuphatha kanye nezakhiwo zokuthola , indawo yokulala, indawo okuhlala kuyo izibi, nokuningi.
"I-CMOAPI iqinisekisiwe yi-ISO 9001: 2008 futhi yonke imisebenzi yayo yebhizinisi ilandela ngokuqinile imigomo yokuphathwa kwekhwalithi yamazwe omhlaba."